Fahananao ve ny fomba fampianarana 3? | Martech Zone
Fahananao ve ny fomba fampianarana 3?
Zoma, Septambra 18, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ireo tranokala, mailaka ary bilaogy dia hita ara-dalàna ary na dia misy ifandraisany amin'ny mpampiasa aza. Izany dia… azonao atao ny mahita (visual) ary afaka mifanerasera (kinesthetic) amin'ny atiny ianao. Inona ny ankamaroan'ny tranonkala, ao anatin'izany Martech Zone, aza manao tsara dia ny manome sakafo mpihainoAnefa.
Ireo fomba fampianarana 3
Visual - ny ankamaroan'ny mpianatra dia maso. Tian'izy ireo ny mamaky ary mianatra indrindra rehefa tohanan'ny tabilao sy sary izany atiny izany.
havanana amin'ny sofina - misy ampahan'ny mponina izay tsy afaka mianatra amin'ny alàlan'ny sary fotsiny… mila tena izy ireo Mihainoa ny fampahalalana hahafantarana azy. Ny feon'ny feo sy ny fiakaram-bidy dia tena zava-dehibe.
Kinesthetic - ny olona sasany dia tsy mianatra amin'ny alàlan'ny famakiana sy ny fihainoana… fa amin'ny alàlan'ny fifandraisana. Na dia mamela an'ity karazana serasera ity aza ny bilaogy, dia misy fotoana fanampiny hanamafisana amin'ny alàlan'ny fitsapan-kevitra, fanontaniana, sary mihetsika ary fampiharana hafa.
Amin'ny maha orinasa azy dia tsy maintsy atao ny ezaka ara-barotra amin'ny Internet fahana ireo fomba fianarana telo ireo. Ny famerimberenana ny atiny dia tsy hanomezana fahafaham-po ny mpianatra mihaino izany - tsy maintsy manome fitaovana ho azy ireo hihainoana ny atiny hahafantarana azy tanteraka. Izany no antony mahatonga ireo pejy fitsangatsanganana cheesy be dia be ao amin'ny tranonkala mampiditra horonan-tsary, lahatsoratra ary karazana fifandraisana.
Tsy manandrana manarona ny tobiny rehetra fotsiny izy ireo… fa vonona ho an'ny mpianatra mihaino izay mitsambikina mivantana amin'ilay horonantsary na ilay mpianatra kinestetika izay mitsambikina mivantana amin'ny fifandraisana.
Izany no antony nanohizanay nanitatra ny tratra Martech Zone amin'ny alàlan'ny radio show, ny Lahatsary Youtube, ny finday fampiharana, ary ny anay an-tsary.
Tags: rehavanana amin'ny sofinafifandraisanakinestetikamaso
Tongasoa eto amin'ny The Blog Marketing Tech 2009
Tonga eto ireo bitsika fanamafisana ny olo-malaza!
Sep 18, 2009 ao amin'ny 6: PM PM
Doug - lahatsoratra mahafinaritra. Nandalo ny fampianarana Sells fampianarana aho tamin'ny fotoana nanombohana azy voalohany ary tena nandoka izany tao an-dohanay i Brian Clark - fa ho fampitaovana eLearning.
Nahita fahombiazana marobe tamin'ny alàlan'ny podcast audio aho fa ankehitriny, manao horonantsary aho ary mizara ilay audio araka ny natoronao azy. Tsy vitan'ny hoe mahasoa ho an'ny mpampiasa farany izany, fa manana vokatra roa mety hivarotra ianao!
Sep 18, 2009 ao amin'ny 11: PM PM
Misaotra Jason! Nianarako ny momba ny fomba 3 amin'ny fianarana amin'ny alalàn'ny fampianarana momba ny varotra entiko izao koa!